Masuulka Ugu Da’da Yar Ee Lagu Boqray Digreeto Madaxweyne Oo Ka Hadlay Qorshahood​a Waxqabad, Baaqna U Diray Dhallinyar​ada Hanka Leh | Salaan Media
Masuulka Ugu Da’da Yar Ee Lagu Boqray Digreeto Madaxweyne Oo Ka Hadlay Qorshahood​a Waxqabad, Baaqna U Diray Dhallinyar​ada Hanka Leh
Hargaysa 23Jun13(SM)Maareeye ku-xigeenka Haayadda Korontada Somaliland Md C/Laahi Yuusuf Cilmi oo nasiib u helay inuu noqdo masuulkii ugu da’da yaraa ee xil qaran loogu magacaabo digreeto madaxweyne ayaa wareysi uu saxaafadda siiyay ku faahfaahiyay sooyaalkiisa shaqsi, sidoo kalena kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin sida uu arko shaqada loo igmaday iyo rejadii uu naawilayay markii hore ee imtixaanka u gelayay xarunta uu hadda maamulkeeda ugu sarreeyo ku jiro, habka ay u tayaynayaan una xallinayaan waxyaabaha ragaadiyay korontada dawladdaxidhiidhka uu lahaa xukuumadda iyo KULMIYE intii aanu jagadan qabannin, ugu dambaytiina farriin u diray dhallinyarada leh hanka siyaasadeed ee ku taamaya inay hoggaaminta waddanka ka qayb-galaan.
Wareysigaasina waxa uu dhacay
S: Sidee ayaad u aragtaa inaad noqoto masuulkii ugu da’da yaraa ee lagu magacaabo digreeto madaxweyne?
J: Bismillaahi Raxmaani Raxiim, marka hore aad ayaad u mahadsan tahay, waan ku faraxsanahay waana kaalin ama rikoodh cusub inaad noqdo ninkii koowaad ee ugu dhallinyarada ahaa ee lagu magacaabo digreeto madaxweyne,
S:Rejo intee le’eg ayaad ka qabtay inaad derejedan gaadho markii aad ku jirtay imtixaankii loogu baratamayay maamulka Haayadda Korontada?
J: Wallaahi marka horeba himilada aan higsanayay waxa ay ahayd xilka ka sarreeya kan an maanta hayo (maareeyaha), rejada aan ka qabayna waxa ahayd 100% waxaanan ahaa nin kartidiisa ku kalsoon isuna arka inuu qaban karo kuna socda xilkan iyo mid ka sii sarreeyaba, rejo badanna waan ka qabay.
S:Wax xidhiidh ah ma lahaydeen Xukuumadda iyo Xisbiga KULMIYE intii aanad noqonnin Maareeye ku-xigeenka Haayadda Korontada Somaliland?
J: Xidhiidh hore oo la taaban karo gebi ahaan ma aannaan lahayn Xisbul-xaakimka iyo xukuumaddaba, waxa jirtay markaan ka mid ahaa Urur-siyaasadeedkii RAYS oo kolkii dambe la midoobay KULMIYE, markaa halkaas ayaa iigu dhawayd KULMIYE.
S: Sidaynu ognahay Haayaddiina waxa horyaalla caqabado badan oo ragaadiyay shaqadeeda, habkee ayaad uga gudbi kartaan dhibaatooyinkaas?
J: Waxa lagaga gudbi karaa iyada oo la qabto shaqo mug leh, loona diyaar ahaado in haayadda la geliyo tamar badan, taasna diyaar ayaannu u nahay si dhakhso ahna haddii Alle idmo waannu u samatabixin doonnaa Haayadda Korontada.
S: Ma filaysaa in wakaaladdiinnu soo saarto koronto tayo leh oo la tartanta shirkadaha korontada ee gaarka loo leeyahay oo haysta inta badan suuqa Hargeysa?
J: La tartanka iyo ka dheeraynta korontada gaarka ahi waxa ay ku xidhan tahay nooca mishiinnada dabka soo saara ee la haysto iyo sida laydhka looga dhigo mid baxa afar iyo labaatanka saacadoodba, marka aannu keenno mishiinno casri ah oo cusub, korontadana aannu ka dhigno mid habeen iyo maalinba shaqaysa waxa aan filayaa in inta badan bulshadu adeegsan doonto korontada dawladda isla markaana aannu suuqa ugu badan gacanta ku dhigi doonno.
S: Dhambaal noocee ah ayaad gaadhsiin lahayd barbaarta leh hanka iyo higsiga siyaasiga ah?
J: Maanta waxa ay dhallinyaradu joogaan xilligii ay ka faa’iidayn lahayeen mihnadda iyo aqoonta ay leeyihiin taasina waxa ay ku xidhan tahay hammiga iyo himilada qof walba ku jira, markaa waxa aan leeyahay haddii ay dhallinyarooy caqabado idinka horyimaaddaan ha ka laabannina higsigiina waxa aydun yoolkiinna gaadhi doontaan marka labaad, marka saddexaad ama marka afraad kolka aad samirtaan.
Haddii aynu si kooban u milicsanno sooyaalka iyo taxanaha waxbarasho ee Maareeye ku-xigeenka Haayadda Korontada Somaliland Md C/Laahi Yuusuf Cilmi, waxa ay dhugan doonnaa qoraal ay diyaariyeen Laanta Taariikhda ee Akadamiga Suugaanta iyo Cilmi-baadhista Somaliland oo u dhignaa sidan “C/Laahi Yuusuf Cilmi waxa uu ku dhashay Hargeysa sannadkii 1984-kii, magaca hooyadii waa Faadumo Muxumed Maxamed waxa uu la dhashay laba iyo toban carruur ah oo isugu jira afar wiil iyo toddoba hablood, waa doob aan weli xaas yeelannin.
Dhanka taxanaha aqooneed oo uu ka dhigtay bar-aqooneedyo Hargeysa ku yaalla waxa uu tacliinta hoose/dhexe ku qaatay dugsiga Guryo-samo isaga oo u gudbay iskuulka Maxamuud Axmed Cali oo ku helay waxbarashada dugsiga sare. Xagga tacliinta sare waxa uu Maareeye ku-xigeenka Haayadda Korontada Somaliland wax ka bartay Jaamacadda Hargeysa isaga oo ka qalin-jebiyay Kulliyadda Maamulka iyo Xisaabaadka, isaga oo si gaar ah ugu takhasusay cilmiga maaraynta (management).
Dhinaca axsaabta waxa uu ka mid ahaa Urur-siyaasadeedkii RAYS ee ku hadhay doorashadii Golaha Deegaanka ee Waddanka ka qabsoontay sannadkii hore oo kolkii dambe la midoobay KULMIYE. Ugu dambayn waxa aannu Alle ka baryaynaa inuu C/Laahi u fududeeyo xilka dhawaan loo magacaabay”.